Wasiirka maaliyadda oo ka warbixiyey horusocodka Guddiga Maamulka Maaliyadeed (FGC) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mogadishu, 25 July 2014: Wasiirka Maaliyadda ee Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya, Xuseen Cabdi Xalane ayaa ka hadlay warbixintii labaad ee horusocodka Guddiga Maamulka Maaliyadeed (FGC) oo la soo saaray 15-kii June, 2014, isagoo diiradda saaray tallaabooyin muhiim ah oo lagu hagaajinayo maamulka hantida guud ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa laga heli karaa:
“Qorshaha Maamulka Maaliyadeed wuxuu xukuumadda iyo deeq-bixiyeyaasha u oggolaanayaa inay ahmiyadda siiyaan xallinta qaar ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee Soomaaliya wajahaya, isagoo naga caawinaya inaan Mustaqbal wanaagsan dhisanno,” ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda Mudane Xuseen Cabdi Xalane. “Waxaan horumar fiican ka gaarnay Qorshaha Maamulka Maaliyadeed, inkasta oo ay muhiim tahay in taageero degdeg ah laga helo deeq-bixiyeyaasha haddii aan xawligan ku sii soconayno.”
Wax-qabadyadii ugu waaweeynaa ee warbixinta lagu xusay waxaa ka mid ah:
• Xeerka Hagaajinta Soo-iibsiga iyo Xeerka Hanti-dhawrka: Labada xeerba waxaa ansixiyay Golaha Wasiirrada waxaana loo gudbiyay Baarlamaanka si loo ansixiyo. Markii la ansixiyo oo ay sharci noqdaan, xeerarkan waxa ay asaas muhiim ah u noqonayaan maamul maaliyadeed oo hufan una adeega danaha muwaadiniinta Soomaaliyeed.
• Qoraal Xisaabeedyo: Bangiga Dhexe ee Soomaaliya iyo Wasaaradda Maaliyadda ayaa diyaariyay qoraal xisaabeedyo muujinaya hufnaan oo asaas u ah maamul wanaagga hay’adaha.
• Qandaraasyada Xukuumaddu bixiso: Guddiga ayaa dib-u-eegis ku sameeyay lix qandaraas oo la bixiyay, kuwaas oo XFS fahansiinaya waxyaabaha ka khaldan qandaraasyada hadda jira muujinayana khatara ay tahay in la iska ilaaliyo markii la sameeynayo qandaraasyada mustaqbalka.
Isagoo ka hadlaya warbixinta, ayuu wakiilka Bangiga Adduunka ugu jira FGC yiri, “Inkasta oo ay wali wax badan dhiman yihiin, horumarka laga gaadhay Qorshaha Maamulka Maaliyadda ayaa gacan ka geysanaya isbaddalo muhiim ah. Waxaan rajeeynayaa in dhammaan deeq-bixiyeyaasha daneeynaya dawlad-wanaagga Soomaaliya ay dardar galin doonaan dadaalladooda lagu taageerayo tayada oo ah muhiim, xaaladaha qaarna, soo dib dhacay.”
Guddiga Maamulka Maaliyada ayaa waxaa la iskugu keenay mas’uuliyiin muhiim ah oo ka socda Dawladda iyo kuwo ay soo magacaabeen Hay’adaha Maaliyadda ee Caalamiga ah (IFIs), kuwaas oo la soconaya fulinta Barnaamijka Maamulka Maaliyadeed (FGP) ee dhawaan la bilaabay.
FGP waxaa loogu talagalay in lagu xoojiyo maaliyadda guud iyo maamulka bangiga dhexe iyo in talooyin madax-bannaan looga bixiyo qeybo muhiim ah oo ka mid ah maamulka maaliyadeed.
Sidaas dartees, FGP waxa uu kabayaa oo xoojinayaa dadaallada xukuumadda iyo deeq-bixiyeyaasha ee lagu dhisayo nidaamyo lagu maamulo hantida guud.
Barnaamijka waxa uu wax ka qabanayaa arrimahan soo socda oo muhiimad degdeg ah u leh maamulka hantida guud ee Soomaaliyeed: sameeynta Bangi Dhexe oo shaqeeynaya si wanaagsanna loo maamulo, maamul wanaagsan oo loo sameeyo maareeynta dakhliga iyo kharashka guud, sameeynta nidaamyo soo-iibsi dawladeed iyo bixinta qandaraasyada, iyo soo celin wax ku-ool ah oo hufan ee hantida Qaran.
Guddiga Maamulka Maaliyadeed (FGC) wuxuu si joogti ah ugu kulmaa Muqdisho inuu la socdo horumarka guud ee Barnaamijka Maamulka Maaliyadeed ee Soomaaliya iyo inuu xukuumadda kala taliyo arrimo muhiim ah iyo qeybaha maamulka maaliyadeed. Guddigu wuxuu ka kooban yahay shan xubnood iyo hal goob-jooge (oo ka socda IMF). Xubnaha waxaa ka mid ah Wasiirka Maaliyadda (ahna Guddoomiyaha), Mudane Xuseen Xalane; Guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee cusub, Mudane Bashiir Ciise; La-taliyaha Sare ee Madaxweynaha ee Dhanka Siyaasadaha Aweeys Xaaji; Wakiilka u jooga Bangiga Adduunka, Nigel Roberts; Wakiilka u jooga Bangiga Horumarinta Afrika, Ellias Ngalande; iyo goob-joogaha IMF, Ake Lonnberg.